Hawlaha ku jira barnaamijka sal-dhigida - Arbetsförmedlingen
Hawlaha ku jira barnaamijka sal-dhigida
Waxaan ayaad ka samayneysaa barnaamijka meeleynta
Barnaamijka meeleyntu wuxuu kooban hawlo kala duwan oo kaa caawinaya inaad afka iswiidhishka barato iyo inaad shaqo hesho. Halkaan waxaad ka heleysaa dhawr nooc oo ka mid ah hawlahaas.
Iswiidhishka anjebiga loogu talagalay
Waxbarashada afka iswiidhishka ajnebiga loogu talagalay (sfi) waxaad ku baraneysaa aqoonta asaasiga ah ee afka iswiidhishka.
Iswiidhishka anjebiga loogu talagalay (sfi) waa barasho luuqadeed oo loogu talagalay dadka ka weyn 16 sano oo aan aqoon asaasi ah u lahayn af-iswiidhishka. Waxaad halkaas ku baraneysaa ku hadlidda, akhriska iyo qorista af-iswiidhishka iyo inaad tababar ku samayso isticmaalka iswiidhishka caadiga iyo kan xirfadaha. Waxbarashadaas waxaa qabanqaabiya maamulada degmooyinka, wuxuuna leeyahay heerar kala duwan oo qof walba gaar ugu habboon.
Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan iswiidhishka ajnebiga ka akhriso barta Wakaaladda waxbarashada
Ku saabsan bulshada iswiidhishka
Barashada macluumaadka bulshada ayaa qayb ka ah barnaamijka meeleynta. Ujeeddaduna waa qofka loo fududeeyo sidii uu bulshada qayb uga noqon lahaa.
Waxbarashadaani waxay sawir kaa siineysaa sida bulshada iswiidhishka iyo suuqa shaqadu u shaqeeyo.
Waxyaalaha aad wax dheeraad ah ka ogaaneyso waxaa ka mid ah
xuquuqda aadanaha iyo mabaadi’da asaasiga ah ee dimoqraadiyadda
xuquuqda aad leedahay iyo waajibaadka ku saaran
sida ay tahay in lagu noolaado oo la shaqaysto Iswiidhen
sida ay Iswiidhen ka tahay in reer la yeesho oo carruur la korsado.
Waxbarasho heerar kala duwan leh
Waxaa jira waxbarashooyin badan oo kala duwan oo aad aqoonta sare ugu qaado karto ama ku sii dhisi karto. Waxay noqon kartaa waxbarasho diyaarin ah, waxbarasho jaamacadeed ama kulliyadeed ama waxbarasho xirfadeed.
Waxaad wax ku baran kartaa kulliyad, jaamacad, waxbarasho takhasus ah ama kulliyad xirfadeed oo intuba ka mid ah barnaamijka meeleynta. Waxbarashooyinkaas adiga ayaa codsanaya, laakiin waxaa muhiim ah inaad marka hore haysato shahaado lagu geli karo. Halkaan waxaa ku qoran dhawr bar internet oo aad ka heli karto talooyin ku saabsan waxbarashooyinkaas:
Komvux waa dugsi ay dadka waaweyni ku bartaan maaddooyinka lagu dhigto dugsiyada hoose iyo dugsiyada sare. Waxaad kaloo Komvux ka dhigan kartaa waxbarashooyin xirfadeed oo gaaban. Ujeeddada waxbarashada noocaan ahi waxa weeye in qofku helo aqoon xirfadeed ama in uu helo shahaado si uu u bilaabo waxbarasho jaamacadeed. Komvux waxaa maamula maamulka degmada.
Waxbarasha-xirfadeedku waa waxbarasho gaaban oo lagu baranayo xirfadaha ay ka jirto baahi shaqaale haysta waxbarasho xirfadeed. Ujeeddada waxbarashadu waa in sare loo qaado fursadaha uu qofku shaqo uga heli karo qaybta shaqada oo uu doonayo. Waxbarasha-xirfadeedyada markaas jira waxay ku xiran yihiin sida hadba suuqa shaqadu u muuqdo iyo meelaha shaqala’aantu ka jirto.
Inta aadan bilaabin waxbarasha-xirfadeed waxaa dhici karta in mararka qaarkood loo baahdo inaad soo qaadato tababar diyaarin ah, sida inaad ka qaybqaadato waxbarasho diyaarin ah ama aad soo marto tijaabin tababar xirfadeed.
Haddii aad dooneyso inaad jaamacad wax ku barato balse aadan haysan shahaado dugsi sare, waxaad koorso maaddooyin diyaarin ah ku soo dhigan karta dugsiyada bulshada. Ujeeddaduna waa inay kuu suurtagasho inaad wax ku barato dugsi sare ama aad sii wadato waxbarasho aad horay u bilowday. Maaddooyinka koorsada lagu qaato waxaa ka mid ah cilmiga bulshada, ingiriisiga, iswiidhishka iyo xisaabta. Waxaad kaloo halkaas ku baraneysaa farsamada habka wax loo barto.
Waxaad bilaabi kartaa tababar shaqo si aad sare ugu qaaddo fursadaha aad shaqo ku heleyso. Tababar waxaad ku samayn kartaa xirfad cusub ama aqoontaada xirfadeed ayaa lagu qiimeynayaa. Waxaad kaloo fursad gu heleysaa inaad xiriir la samaysato shaqaale iyo goobo shaqo oo cusub. Haddii aadan hubin xirfadda aad dooneyso waxaad heli kartaa hage talooyin ku siiya, booqasho aad ku tagto goobo shaqo ama tijaabin tababar shaqo.
Ujeeddada tababarka shaqadu waa si ay u kordhaan fursadahaaga inaad shaqo hesho. Waxay kaloo tababarka shaqadu u wanaagsan tahay qofka aan hubin shaqada uu doonayo ama wax uu barto. Tababar waxaad ku samayn kartaa xirfad cusub ama aqoontaada xirfadeed ayaa lagu qiimeynayaa. Waxaad kaloo fursad gu heleysaa inaad la kulanto shaqaale iyo goobo shaqo oo cusub.
Inta aad tababarka ku jirto waxaa ku caawinaya qof hage ah, marka aad dhammaysana wuxuu shaqabixiyuhu ku siinayaa warqad caddayn shaqo.
Ma jirtaa xirfad aad khibrad u leedahay laakiin aadan caddayn ka haysan? Markaas waxaa lagaa caawini karaa in aqoontaada xirfadeed laguu qiimeeyo. Qiimeyntu waxay ka kooban tahay imtixaan tababar iyo mid qoraal oo loogu yeero qiimeyn.
Marka hore waxaan wadajir isu la meeldhigeynnaa waxbarashadaada iyo aqoomahaaga xirfadeed si aan u ogaanno haddii aad u baahan tahay qiimeyn. Qiimeynta kaddib waxaa lagu siinayaa shahaado caddeyneysa aqoontaada xirfadeed.
Haddii aad haysato shahaado waxbarasho aad dal kale oo aan Iswiidhen ahayn ku soo dhigatay, adiga ayaa soo gudbinaya shahaadada iyo caddaymaha oo turjuman una soo diraya Golaha jaamacadaha oo qiimeyn ku sameynaya.
Marka aad iska shaqo u raadsaneyso waxaan ku siineynnaa talooyin iyo gacansiin. Waxaan kaloo kugu wargelineynnaa meelaha ay ka jiraan kulamo shaqaalayn oo kugu habboon.
Mar haddii aad ka qaybqaadato barnaamijka meeleynta, waxaa shaqabixiyaha ku shaqaaleeya la siinayaa lacag.
Inaad bilowdo ganacsi
Haddii aad dooneyso inaad ganacsi furato waxaad heli kartaa lacagta meeleynta inta lagu jiro waqtiga bilowga ah oo aad ganacsigaas ku hawllan tahay. Waxaa kaloo lagu siinayaa talooyin kala duwan. Laakiin xasuusnow inay khasab tahay inaan marka hore dejinno qorshe ganacsi oo aan qiimeynno shuruudaha uu ganacsigaasi ku guuleysan karo.
Haddii aad dooneyso inaad ganacsi furato waxaad heli kartaa lacagta meeleynta inta lagu jiro waqtiga bilowga ah oo aad ganacsigaas ku hawllan tahay. Waxaa kaloo lagaa caawinayaa inaad ka qaybgasho shirar warbixin, talasiin iyo koorsooyin ganacsi-bilaabid.
Waxaad marka hore u baahan tahay qorshe ganacsi. Waxaan falaanqeyneynnaa qorshahaaga ganacsi annagoo qiimeyneynna fursadaha uu ganacsigaasi u noqon karo mid lagu guuleysto. Waxaad kaloo u baahan tahay inaad Hay’adda canshuuraha ka dalbato warqadda canshuurta ee F. Xasuusnow in aadan bilaabin shaqada ganacsiga ka hor inta aadan naga helin go’aan inaad ka qaybqaadan karto barnaamijka meeleynta.
Caawimaad iyo taageero ayaad ka heli kartaa meelo kala duwan. Labadaan ayaana ka mid ah:
Xarunta talasiinta ganacsileyda cusub
Waxaa caawimaad dheeraad aha la siinayaa qofka cudur ama naafo qaba
Waxaan jecel nahay inaad noo sheegto haddii caafimaadkaaga ama naafo ay saamayn ku yeelan karto awoodda inaad hawlahaas ka qaybqaadato. Waxaan isla baareynnaa caawimaadda aad u baahan tahay si aad uga qaybqaadato hawlahaas meeleynta.
Haddii aad u baahantihid dadaallo si gaar ah laguu waafajiyay, Xafiiska shaqada ayaad taageero ka heli kartaa.Waxaad heli kartaa qalab waxtar leh oo aad u adeegsato shaqa-raadinta, iyo weliba in lagaa caawino xiriirka shaqabixiyayaasha.
Haddii aadan hubin xirfadda aad dooneyso inaad ku shaqeyso, waxaad ka qaybqaadan kartaa barnaamijka bandhig shaqo. Tusaale waxaad kaloo heli hagid, fursado booqasho goobo shaqo ama tababar shaqo oo aad ku samayso goob shaqo.
Xaaladaha saamayn ku yeelan kara awooddaada shaqo ama waxbarasho waxaa ka mid noqon kara.
Haddii aad qabto dhibaato aragga, sida inaad aqoonsato qof meel dheer jooga ama inaad akhriso qoraal far yaryar.
Haddii qoyska dhibaato ka jirto, sida si xun u isticmaalka khamri iyo maandooriye, qof ehel oo xanuunsan ama gacanqaad guriga ka dhaca.
Waa kuwee hawlaha meeleynta oo kugu habboon?
Waxaan annaga iyo adiga isla qorsheyneynnaa hawlaha barnaamijka meeleynta oo aad markaas heli karto.